59.“ Wixii uu Rasuulku idin siiyo ama idin faro qaata, wixii uu idinka reebana ka hadha, Alle na waa in laga dhowrsado, maxaa yeelay Ciqaabtiisu waa darantahay”. (Suurada Al-Xashar:Aayada:7).
163. Jaabin (A.K.R.) Wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Aniga iyo idinku waxaan la matal nahay nin inta dab shitay; ay markaas balanbaalistii iyo cayayaankii bilaabeen inay ku soo ordaan kuna soo daataan, isaguna ninkii dabka shitay ka celcelinayo. Anigu ninkaa baan la mid ahay waxaan isku dayayaa inaan guntiga idin qabto (si aan idiinka badbaadiyo) naar, idinkuna waad ka fakaneysaan gacanteyda". (Muslim)
164. Jaabir (A.K.R.) wuxuu kaloo yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu amray muslimiinta in faraha la leefo, la nadiifiyana weelasha (marka raashinka laga cuno kaddib) wuxuuna yiri: "Ma garan kartaan qaybtee baa cunnadu barakadu ku jirtaa". (Muslim)
Werin kalena waxay ahayd oo Muslim ku taal: "Haddii ay midkiin ka dhacdo waslad, waa inuu soo qaadaa, ka nadiifiyaa wixii gaaray oo boor iwm ah. oo markaas cunaa, oo waa inuusan uga tegin shaydaanka. Waa inuusanna qofku marin gacantiisa istiraashada isagoo aan ka leefin (cuntada haraaga ku ah) farahiisa, maxaa yeelay ma oga qofku qaybtee baa cuntada barakeysan - macnaha ay barakadu ku jirtaa".
Werin kale oo Muslim ku taal baa waxay leedahay: "in Nabigu (S.C.W.) uu sheegay in sheydaanku mar iyo munaasabad kasta xaadir yahay xitaa markii aad wax cunaysid. Sidaa awgeed, haddii ay qofkiin ka dhacdo waslad (ama rudmad) waa inoo qaataa, ka nadiifiyaa boorka iwm., oo markaas cunaa uusanna uga tegin shaydaanka."
Fiiro gaar ah:Dhowrista iyo ilaalinta sunnada nabiga (S.C.W.) iyo inaad adoo raalli ah, aad aqbashaa waa waajib iyo xil saaran qof kasta oo Muslim ah goor iyo waa walbaba, sida ay ku dhawaaqeen aayadaha Qur’aanka, Alle weynaa oo kor ahaaye ma saarin rususha xil ah oo keliya inay diinta dadka gaarsiiyaan, bal wuxuu ka yeelay macallimiin, hanuuniyayaal, toosiyayaal, iyo tusaale lagaga daydo dhaqanka suubban, si falalka iyo hadalladooda ileys looga dhigto mugdiga lagu iftiinsado, iyo dhabbo la raaco. Taasina waa lagama maarmaan si ay dadku u ogaadaan in adeecidda rasuulka Alle ay tahay cibaado. Alle wuxuu yiri: ‘ Kii rasuulka adeecaa, wuxuu adeecay Alle’.